जब घरबेटीले भाडामा बस्न आएकी महिला यौनकर्मी भएको कुरा थाहाँ पाए... -जब घरबेटीले भाडामा बस्न आएकी महिला यौनकर्मी भएको कुरा थाहाँ पाए... -
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १२:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पार्वती (नाम परिवर्तन) व्यावसायि यौनकर्मी हुन्। यही कामले उनको घरपरिवार चलेको १० वर्ष भयो। यस बीचमा उनी काठमाडौँको सयभन्दा बढी ठाउँमा डेरा सरिसकिन्। ‘घरबेटीले यौनकर्मी भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै घरबाट निकालिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। हामीलाई हेर्दै कानेखुशी गर्ने धेरै हुन्छन्। जता गए पनि हामीले ठक्करैठक्कर खानुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।’स्वास्थ्य समस्या पर्दा उनी डाक्टरकहाँ जाँदिनन्।
कुनै ग्राहकले ठगेर भाग्यो भने प्रहरीकहाँ उजुरी गर्नेबारे उनले कहिल्यै सोचेकी छैनन्। ‘हामी यौनकर्मी हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै जसले पनि हामीलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘ग्राहकसँग जाने बेलामा मात्र हामी यौनकर्मी हौँ। बाँकी समय हामी पनि कसैका दिदी, बहिनी र आमा हौँ। तर, जसले पनि हामीलाई एकचोटि यौनकर्मी भनेर चिनेपछि सधैँभरि यौनकर्मीकै रूपमा चिन्छन्, त्यस्तै व्यवहार गर्छन्।’
आफूजस्ता महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बस्नै डरमर्दो भएको उनले सुनाइन्। ‘केही नगर्दा पनि चिया खाएको ठाउँबाट प्रहरीले समातेर लैजान्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘सार्वजनिक बाटोमा हिँड्ने हाम्रो चाहिँ अधिकार छैन र ? हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ।’ पार्वतीकी साथी अनुजा (नाम परिवर्तन) लाई केही दिनअघि रत्नपार्कमा प्रहरीले समात्यो। ‘पुलिसले चौकी पुर्‍याउनुअघि नै नराम्ररी पि”ट्यो,’ उनले भनिन्, ‘मेरो जीउमा अझै पनि नी’लडा’म छन्। हामी त रत्नपार्कमा उभिएको देख्नै हुँदैन, समातिहाल्छ।
केही गल्ती नगर्दा पनि पुलिस देखेपछि भाग्न बाध्य हुन्छौँ।’ प्रहरीले समातेर मात्रै आफ्नो समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्। ‘वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेशा हामी छाड्दैनौं,’ अनुजाले भनिन्, ‘हामीले कसरी सुरक्षित रूपमा यौ”न श्रम गर्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यौं। बुझ्न नसकेको त कानुनको कुरा मात्र हो।
कानुनले यौ”न श्रमिक महिलालाई कु’टे”र थ”ला पार भन्छ हो ? नत्र हामीलाई दिउँसै सडकमा हिँड्न किन दिइँदैन ?’ अनुजालाई मानिसहरूले यौ’नक’र्मी, यौ”न व्यवसायी, दे’हव्या”पारी भनेको मन पर्दैन। ‘हामी यौ’नक’र्मी होइनौँ, दे’ह’व्या’पा’री होइनौँ, यौ”न व्यवसायी पनि होइनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त यौ”नको श्रम गर्ने यौ”’न श्रमिक हौँ। हामीले शरीरको व्यापार होइन, शरीरको श्रम गरेका हौँ।’
पार्वती (नाम परिवर्तन) व्यावसायिक यौ’नक’र्मी हुन्। यही कामले उनको घरपरिवार चलेको १० वर्ष भयो। यस बीचमा उनी काठमाडौँको सयभन्दा बढी ठाउँमा डेरा सरिसकिन्। ‘घरबेटीले यौ’नक’र्मी भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै घरबाट निकालिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। हामीलाई हेर्दै कानेखुशी गर्ने धेरै हुन्छन्।
जता गए पनि हामीले ठक्करैठक्कर खानुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।’स्वास्थ्य समस्या पर्दा उनी डाक्टरकहाँ जाँदिनन्। कुनै ग्राहकले ठगेर भाग्यो भने प्रहरीकहाँ उजुरी गर्नेबारे उनले कहिल्यै सोचेकी छैनन्। ‘हामी यौ’नक’र्मी हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै जसले पनि हामीलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘ग्राहकसँग जाने बेलामा मात्र हामी यौ’नक’र्मी हौँ। बाँकी समय हामी पनि कसैका दिदी, बहिनी र आमा हौँ।
तर, जसले पनि हामीलाई एकचोटि यौ’नक’र्मी भनेर चिनेपछि सधैँभरि यौ’नक’र्मीकै रूपमा चिन्छन्, त्यस्तै व्यवहार गर्छन्।’ आफूजस्ता महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बस्नै डरमर्दो भएको उनले सुनाइन्। ‘केही नगर्दा पनि चिया खाएको ठाउँबाट प्रहरीले समातेर लैजान्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘सार्वजनिक बाटोमा हिँड्ने हाम्रो चाहिँ अधिकार छैन र ? हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ।’ पार्वतीकी साथी अनुजा (नाम परिवर्तन) लाई केही दिनअघि रत्नपार्कमा प्रहरीले समात्यो।
‘पुलिसले चौकी पुर्‍याउनुअघि नै नराम्ररी पि”ट्यो,’ उनले भनिन्, ‘मेरो जीउमा अझै पनि नी’लडा’म छन्। हामी त रत्नपार्कमा उभिएको देख्नै हुँदैन, समातिहाल्छ। केही गल्ती नगर्दा पनि पुलिस देखेपछि भाग्न बाध्य हुन्छौँ।’ प्रहरीले समातेर मात्रै आफ्नो समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्। ‘वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेशा हामी छाड्दैनौं,’ अनुजाले भनिन्, ‘हामीले कसरी सुरक्षित रूपमा यौ”न श्रम गर्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यौं।
बुझ्न नसकेको त कानुनको कुरा मात्र हो। कानुनले यौ”न श्रमिक महिलालाई कु’टे”र थ”ला पार भन्छ हो ? नत्र हामीलाई दिउँसै सडकमा हिँड्न किन दिइँदैन ?’ अनुजालाई मानिसहरूले यौ’नक’र्मी, यौ”न व्यवसायी, दे’हव्या”पारी भनेको मन पर्दैन। ‘हामी यौ’नक’र्मी होइनौँ, दे’ह’व्या’पा’री होइनौँ, यौ”न व्यवसायी पनि होइनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त यौ”नको श्रम गर्ने यौ”’न श्रमिक हौँ। हामीले शरीरको व्यापार होइन, शरीरको श्रम गरेका हौँ।’